कब्जियत हुन्छ ? खानुस् काँचो केरा (फाइदासहित) - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com कब्जियत हुन्छ ? खानुस् काँचो केरा (फाइदासहित) - खबर प्रवाह
एजेन्सी । पाकेको केराको फाइदाका बारेमा जान्नुभएकै होला, तर के तपाईलाई काँचो केराको फाइदाका बारेमा थाहा छ ?
यस्ता छन काँचो केराका फाइदाहरु-
तौल घटाउँन सहयोग
तौल घटाउँन मन लागेकालाई दैनिक एक काचो केरा खाने सल्लाह दिइन्छ । यसरमा भरपूर मात्रामा पाइने फाइबरले अनावश्यक फ्याट सेल्स र फोहोरलाई सफा गर्न मद्दत गर्छ ।
कब्जियतको समस्या हटाउन
काँचो केरामा फाइबर र हेल्ची स्टार्च नामक तत्व हुन्छन्, जसले आन्द्रामा कुनै पनि प्रकारका अशद्धि उत्पन्न हुन दिँदैन । तपाईलाई कब्ज्यितको समस्या छ भने काँचो केरा फाइदाजन साबित हुन्छ ।
भोक शान्त पार्ने
काँचो केरामा पाइने फाइबर र अन्य केही पोषक तत्वले भोक नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । काँचो केरा खानाले समयमा भोक नलाग्ने हुन्छ ।
मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्छ
मधुमेहका रोगीले काँचो केरा खान सुरु गर्नुहोस् । यो रोग नियन्त्रण गर्ने अचुक औषधि हो ।
पाचन क्रिया सुधार्छ
काँचो केराको नियमित सेवन गर्नाले पाचन क्रियामा सुधार आउँछ ।
यसबाहेक काँचो केरा धेरै प्रकारका क्यान्सरबाट बचाउँनमा पनि सहायक भूमिका खेल्छ । त्यस्तै, काँचो केरामा पाइने क्याल्सियमले बलियो हड्डी बनाउँनमा पनि सहायक भूमिका खेल्छ ।
[email protected], [email protected]habarprawaha.com